Nhau - Chisungo cheUshamwari, Bhiriji reZvekutengesa
Pasi pemamiriro ezvinhu akaomarara ehutachiona hutsva hwepasi rose korona, iyo 129th Canton Fair yakasvitswa zviri pamutemo mugore muna 9 am musi waApril 15, 2021. Ikozvino Canton Fair ichaitwa kubva muna Kubvumbi 15 kusvika 24, uye kuratidzwa kunogara gumi mazuva. Kusiyana nezviratidziro zvepamhepo zvisati zvaitika 2020, Canton Fair yegore rino ndiyo Cloud Canton Fair, uye vatengi vanobva kumatunhu ese nematunhu vanogona kubata vatengesi kuburikidza nepuratifomu yegore. Vatengi havazoneta nekufamba kana kushanyira chiratidziro netsoka, asi vanogona vachiri kudzidza nezve zvigadzirwa zvavanofarira kuburikidza nenzira dzakasiyana siyana nenzira dzakadai sekutengesa nhepfenyuro, vhidhiyo, mutengesi kutaurirana pamhepo, uye meseji.
Iyo Cloud Canton Fair haingovimbise kubatwa kwakanaka kweyekutengesa zvakanaka, asi zvakare inodzivirira kuungana kwevanhu, inodzivirira hutachiona hweiyo coronavirus nyowani, uye inochengetedza hutano nekuchengeteka kwevaratidziri vese neruzhinji.
Huwandu hwematumba muCanton Fair yegore rino ingangoita zviuru makumi matanhatu. Zvinotarisirwa kuti pachave nemakambani anosvika zviuru makumi maviri nezvishanu zvemukati nekunze. Kune huwandu hwenzvimbo dzekuratidzira makumi mashanu, dzakakamurwa muzvikamu gumi nezvitanhatu zvezvinhu zvakaita semagetsi, michina, zvekuvaka, zvinhu zvevatengi, kusimudzira dzimba, machira, zvipfeko, uye mapindu.
Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co., Ltd. zvakare vakapinda muchiratidziro ichi. Zvigadzirwa zvakatangwa zvigadzirwa zvekudiridzira, zvinosanganisira matepi emadiridziro emadiridziro, madhiji ekudiridzira, matepi madiki-ekusasa, mapfapfaidzo, kudonhedza tepi zvishongedzo, nezvimwe.
Kuburikidza kuratidzira uku, isu takasimbisa kutaurirana nevatengi vekunze. Tine nyanzvi R & D uye dhizaini timu uye yehunyanzvi yekushambadzira timu timu. Isu tinotenda zvakasimba kuti munguva pfupi iri kutevera, isu tichasvika pakubatana hukama nevatengi vatengi. Tinotarisira kubatana kwako!
Post nguva: Kubvumbi-15-2021